६ जनालाई लखेटी-लखेटी हत्या गर्ने को हुन् लोकबहादुर ? - Globe Nepal
६ जनालाई लखेटी-लखेटी हत्या गर्ने को हुन् लोकबहादुर ?
ग्लोब नेपाल	शनिबार, २६ भाद्र २०७८ गते २२:३६ मा प्रकाशित
संखुवासभा । संखुवासभाको मादी-१ उम्लिङमा एक वर्षअघि लोकबहादुर कार्कीकी आमा तेजबहादुरको घरमा लडेकी थिइन्। उनको आमा बेहोस भएपछि उपचारको क्रममा झापामा मृत्यु भएको थियो । लोकबहादुरले आफ्नी आमाको मृत्युको कारण तेजबहादुर नै भएको आरोप लगाउँदै आएका थिए । तेजबहादुर र लोकबहादुरको घर करिब १०० मिटरको दुरीमा छ ।
यसैबीच गत सोमबार बिहान खेताला खोज्न निस्किएका तेजबहादुरलाई लोकबहादुरले बाटोमै कुरेर बसे । र, आक्रमण गरेर हत्या गरे । तेजबहादुरको हत्या गरेको पत्नी कमला र बुहारी रञ्जनाले घरबाट देखेपछि दौडिँदै गए । घरनजिकै रहेको खोलाछेउमा उनीहरूलाई पनि लोकबहादुरले ह्यामरले हिर्काएर हत्या गरे ।